Mampihena ny fakonao - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fantatrao ve fa isaky ny olona iray, Aostralia dia iray amin'ireo mpamokatra fako avo indrindra eran-tany? Ny fako betsaka vokarintsika dia misy fiantraikany maro eo amin'ny tontolo iainana, manomboka amin'ny fahapotehan'ny harena voajanahary matetika tsy azo havaozina ka hatramin'ny fitakiana angovo be loatra amin'ny fitantanana ny fako.
Mety ho mora ny fampihenana ny fako, raha toa ka manaraka ny ambaratongan'ny fampihenana ny fako ianao:
Dingana 1: Ahena:
Ny fomba mahomby indrindra hampihenana ny fako dia ny tsy mamorona azy amin'ny voalohany.
Fantatrao ve fa ny tokantrano salan'isa any NSW dia manary sakafo mitentina 1,000 dolara isan-taona? Ny drafitra kely dia mandeha lavitra. Ny fanaraha-maso ny vata fampangatsiahanao alohan'ny hanaovanao ny lisitry ny fiantsenanao dia afaka misoroka ny fividianana be loatra sy ny fandaniam-bola, ary miantoka ny tsy lany andro ny sakafonao alohan'ny hampiasanao azy. Zahao hoe Tiavo ny fako ankafizin'ny sakafo ho an'ny toro-hevitra momba ny fiantsenana, ny fitantanana ny pantry, ny daty ampiasaina ary ny fitahirizana sakafo.
Natao be loatra ho an'ny sakafo hariva? Ampidiro amin'ny sakafo antoandro ny ampitson'iny na ataovy mangatsiaka mba hisakafo hafa. FITSIDIHANA tsiro ho aingam-panahy hanova ny sakafo hariva ho sakafo vaovao!
Manangana komposta na toeram-pambolena kankana ho an'ny voankazo sy legioma. Tsy mampihena fotsiny ny fako sakafo miditra ao amin'ny dabam-baravaranao izany, fa manome anao zezika sy kankana tsara ho an'ny zaridainanao. Tsidiho ny Tontolo iainana & Lova tranokala hianarana bebe kokoa.
Fantatrao ve fa 5.6 tapitrisa nappies fanariana no ampiasain'ny Aostraliana isan'andro?!! Izany dia roa lavitrisa nappies azo ampiasaina any amin'ny fanariam-pako any Aostralia isan-taona! Nappies lamba azo ampiasaina indray dia lasa lavitra tao anatin'ny folo taona lasa. Na mampiasa azy ireo tapa-potoana na manontolo andro, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fako sy ny fofona ao amin'ny dabam-pako.
Dingana 2: Ampiasaina indray:
Ireto misy hevitra vitsivitsy hampihenana ny fako amin'ny fampiasana bebe kokoa:
Mitondrà kitapo fiantsenana, harona na boaty azo ampiasaina indray rehefa miantsena. Raha mila mampiasa harona plastika ianao, dia avereno ampiasaina amin'ny dianao manaraka na mitadiava fampiasana hafa ho azy, toy ny famadihana azy ho fitoeran-drano.
Mivilia amin'ny dikan-teny azo ampiasaina indray amin'ny entanao tokana, toy ny batterie azo averina sy ny hareza sy ny nappies azo ampiasaina indray.
Ny fividianana na fanoloana ny akanjonao taloha miaraka amin'ny namana sy fianakaviana dia mety ho fomba mora sy mahafinaritra hampihenana ny fako. Jereo ny Planet Ark tranokala hianarana ny fomba ahafahanao mampiantrano ny antoko Swap anao manokana.
Raha esorinao ny fanaka tsara kalitao, akanjo na kitapom-batana amin'ny ankapobeny, eritrereto ny mitazona fivarotana garazy, mivarotra azy ireo amin'ny Internet na manome fanomezana any amin'ny fivarotanao eo an-toerana.
Dingana 3: Recycle:
Amin'ny alàlan'ny dabam-baravaranao mavo sy ny programa fanodinana hafa:
Ireny azo averina ireny dia miditra ao amin'ny papier mavo sarony, baoritra, kapoaka vy, tavoahangy plastika mafy sy fitoeran-javatra, tavoahangy fitaratra ary siny. Tsidiho ny anay Toeram-pisakafoanana pejy ho an'ny lisitra feno.
Avereno indray ireo kasety fanontam-pirinty tsy misy na inona na inona any amin'ny Australia Post, Officeworks, Dick Smith Electronics, JB Hi Fi, The Good Guys ary Harvey Norman amin'ny alàlan'ny Cartridges 4 Planet Ark.
Mitadiava toeram-pivarotana lehibe eo an-toerana izay manolotra trano fanodinana harona plastika, toy ny Coles na Woolworths.
Tsidiho ny E-Fako fanodinana, Light Globe & Famerenana bateria ary Fanadiovana simika pejy hianarana bebe kokoa momba ny fandaharan'asa fanodinana hafa an'ny Filankevitra.
Tsidiho ny Planet Ark Famerenana eo akaikinao tranokala hahitana antsipiriany momba ny fanodinana finday, solosaina, bosoa ary maro hafa.